WWDC 2018 dia nohamafisina tamin'ny fomba ofisialy, manomboka amin'ny 4 Jona! | Avy amin'ny mac aho
Ny vaovao voalohany mikasika ny fehezan-teny efa ananantsika eto ary tsy momba ny fehezan-teny nandrasana ho tonga amin'ity volana martsa ity, miresaka momba ny hevi-dehibe nosokafan'ny WWDC isan-taona isika. Ny fisoratana anarana hangataka ny fidiran'ny mpamorona dia efa misokatra ary ahoana no fomba hafa, Ity WWDC ity dia hatao amin'ny 4 Jona ka hatramin'ny 8 Jona.
Ny toerana voafidy ho an'ny keynote dia tsy iza fa ny ny McEnery Convention Center, any San José (Kalifornia) Ary io dia araka ny tsikaritray andro vitsivitsy lasa izay tao amin'ny tranonkala, be olona io toerana io nandritra ireo daty ireo ary nampiakatra ny ahiahy avy amin'ny haino aman-jery izay efa naminavina ny fankalazana ny hetsika amin'ity ivon-toeran'ny fivoriambe ity.
Ny hetsika Apple voalohany amin'ny taona 2018 dia ofisialy sy ny vidin'ny tapakila afaka mahatratra 1000 dolara mahery. Na izany na tsy izany dia hetsika iray izay nandoavan'i Apple kisarisary ho an'ny mpanatrika sasany izany. Ireo izay tsy tsara vintana mandray tapakila dia tsy maintsy mandoa izany, ankoatry ny fidirana amin'ny raffle rehefa mihoatra ny famatsiana ny fangatahana, zavatra izay matetika mitranga isan-taona amin'ity WWDC ity.
Ny mpandraharaha dia afaka mangataka tapakila manomboka izao hatramin'ny 22 martsa amin'ny 18:00 hariva PDT amin'ny Tranokala WWDC. Ny mpandray anjara dia tendrena amin'ny alàlan'ny dingam-pifidianana tsy ampoizina, ary hampandrenesina ireo mpamorona ny momba ny fangatahany amin'ny 24 martsa amin'ny 1:00 maraina.
Amin'izany fomba izany, ny efa azontsika tsara dia ny hanao ny laharam-pahamehana voalohany amin'ny taona amin'ny volana Jona ny orinasa, amin'ny 4 Jona manokana ary na dia marina aza fa tsy manolotra vokatra toy izany izy ireo, mety hisy zavatra dia hianjera amin'ity taona ity satria ny tsaho momba ireo Mac vaovao dia mifandraika mivantana amin'ity keynote voalohany ity. Ho hitantsika raha milatsaka ilay MacBook 13,3-inch vaovao ary manafoana ny MacBook Air izy ireo na dia mandefa ny iPad vaovao aza izy ireo izay tsaho koa ao amin'ny Internet. Ny zava-dehibe dia efa manana daty ofisialy isika ary tsy esorin'iza n'iza, Tondroy mena ny kalitao 4 Jona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » WWDC 2018 dia nohamafisina tamin'ny fomba ofisialy, manomboka amin'ny 4 Jona!
Reverb, fomba maimaim-poana hanandramana Amazon Alexa amin'ny Mac